Vista's Colorful Planet: ဦးစန်းညွန့်( ၂ )
သံယောစဉ်ဆုိုတာသိပ်ဆန်းကြယ်တယ်နော်။ တနေ့ တော့ဆုံရမှာပါ။ ဦးစန်းညွန့် ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကုိုယ်ငယ်ငယ်က ဒက်ဒီ့ရုံးက ဒရုိုင်ဘာကြီး ဦးသံလုံးကိုတောင်သတိရသွားမိတယ်။ ကုိုယ့်ကုိုသိပ်ချစ်လုို့ လေ။
အိုင်အိုရာ (ရေးဘုို့ ကျန်သွားလို့ )း)
မဆီမဆိုင် အပြောခံနေရတယ် ဟိ
May safe and sound U san Nyunt.Wishing you both to meet happily again.My thought to our driver late Husein in Brunei.His relation to my younger son was the same.
ဦးစန်းညွှန့်ကြီး အမြန်ဆက်သွယ်ပါစေဗျာ။ မိသားစုသံယောဇဉ်ဆိုတာ ဖတ်ရတဲ့သူကိုတောင် နွေးထွေးစေပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်တယ် အိုင်အိုရာ ကိုယ်လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်
ချာချီ ဒေါ်ပြား ကို ပြောတာက အိမ်မှာလည်း အဲလိုတွေ စနေကြမို့့ပါ ဟိဟိ။
Thanks alot Gyi daw .. i m hoping too.
ကျေးဇူးပါ လီယိုး)။
ဦးစန်းညွန့်ကို ဖတ်ရတာ၊ ငယ်ငယ် တုန်းက အကြောင်းတွေကိုပြန်သတိရတယ်။ သူတို့က ဘယ်ပဲရောက်နေ ရောက်နေ၊ သံယောဇဉ် အားကြီးတွယ်တတ်ကြတယ်။ သီတင်းကျွတ်ဆိုရောက်လာကြပြီ။
အပိုင်း ၁ နဲ့ ၂ ကို တခါထဲ ဖတ်သွားတယ် ညီမရေ..၊ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ..၊ ညီမက လူတစ်ယောက်ကို ဖွဲ့နွဲ့တဲ့ နေရာမှာ မျက်စိထဲ ထင်းကနဲ ပေါ်လာအောင် ရေးနိုင်ပါတယ်၊ ဟိုတခါ ချိုလဲ့ခိုင် ပို့စ်မှာကတည်းက သတိထားမိတယ်၊ ဒီတစ်ပုဒ်မှာတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဦးစန်းညွန့်ရဲ့ လက်ရာတွေ မြည်းရင်း၊ ဘေးမှာ အတူကြီးပြင်း ခဲ့ရသလိုပါပဲ၊ ဒေါ်ပြားကို ခဏခဏ ခလုတ်တိုက်နေတဲ့ ဟာသစွက်တဲ့ အရေးအသားမျိုး ကြောင့်လည်း ပို့စ် ၂ ခုစလုံးက ချောမွေ့ညက်ညော နေခဲ့တာလို့ ထင်တယ်၊း)
အထူးသဖြင့် အပေါ်ယံမှာ ပေါ့ပါးသယောင် ထင်ရပေမယ့် နက်ရှိုင်းစွာ ပြန်လှန် ရစ်ပတ်နေကြတဲ့ မေတ္တာကြိုးတွေကို မြင်လာအောင် ရေးသွားနိုင်ခဲ့တာမို့ တကယ့်ကိုပဲ two thumbs up လို့ ပြောပါစေ ညီမရေ..။
မျက်ကျိ .. ဟုတ်တယ် ခုက မလာတေ့ာလို့း(
ကိုညီ ..ကျေးဇူးပါး)။ အားပေးဖော်ရတော့ ရေးရဲတာပေါ့နော်။
မင်္ဂလာပါ ... ညီမရေ
ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ။ ။
၁ နဲ့ ၂ ကိုခုမှပေါင်းဖတ်ခဲ့တာပါ
ဦးစန်းညွှန့်ကြီးနဲ့ မြန်မြန် ပြန်တွေ့ပါစေ။ ဒီတစ်ခါ တွေ့ရင် အိမ်မှာပဲ ခေါ်ထားလိုက်ပါတော့လား။
တကယ်တော့ ဦးစန်းညွှန့် ဆိုတဲ့ နာမည်ကကို ကိုယ့် အဘကြီး နာမည်နဲ့တူပီး ပုံဖော်ထားတာလဲ နဲနဲဆင်တယ်။ အဘကြီးကလဲ လူပျိုကြီးပဲ အသက် 56 မှာ ဆုံးသွားတာ။း(